Autoresponder Assembly Line
Wenezdee, Machị 13, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Usoro ahia gị anaghị esochi atụmanya ịzụ ahịa gị. Ọ bụghị naanị na enwere ike ịhazi mkpọsa gị n'oge na-ezighi ezi, enwere ike ọ gaghị ewepụta ya iji nye ozi dị mkpa karịa oge iji mee ka atụmanya bụrụ onye ahịa. Ngwaọrụ na-ere ahịa na-ewu ewu na-ewu ewu n'ọma ahịa n'ihi na ha na-enye ohere lekọta anya onye ahịa n’oge onye ahịa ya chọrọ ka agwa ya okwu.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahapụ ohere maka nnukwu ndu gafere ha. Ndị na-ebugharị onwe ha na-enye azịza site na ịza nzaghachi email na-akpaghị aka n'ime minit 15 nke ntinye ntanetị. Soro usoro mgbakọ iji hụ otu ụfọdụ ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa si eji autoresponders na mmemme azụmaahịa ha - ma chọpụta ma ị wulitela onwe gị dịka koodu si dị.
Taa Kpọpụta wepụtara wepụtara ha ahịa akpaaka kacha mma omume: 2013 Autoresponders Study na arụpụtara a nifty infographic ka mma iji anya nke uche anyị chọpụtara na atụ ụlọ ọrụ omume kacha mma maka autoresponders na email ahịa.
Tags: akpaakaakpaakaozi emailakụrụngwa ahịana-azụlite yaazụlite mkpọsa
WordPress.com? Nke a bụ ihe kpatara m ga-eji jiri ya mee ihe mbụ.